Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football nge-isidlaliso "I-New Michael Carrick". Indaba yethu ye-Sean Longstaff yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje.
I-Sean Longstaff Indaba Yobuntwana- Ukuhlaziywa
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokuphakama kwakhe eNewcastle, umdlalo okwenze uManchester United athole isignesha yakhe. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka i-biography kaSean Longstaff okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, amagama akhe agcwele; Sean David Longstaff. U-Sean Longstaff njengoba ayevame ukubiza, wazalwa ngo-30th ka-Okthoba, u-1997 kuyise, uDavid Longstaff nomama, uMichelle Longstaff edolobheni laseNewcastle eTyne, e-United Kingdom.
USean wakhulela eceleni komfowabo omncane uMathewu ekhaya lomndeni wezemidlalo. Ekhula, uSean waphawula ukuthi abazali bakhe bazibandakanya kakhulu ezemidlalo. Ukukhuluma Sports, Kwakungewona nje uthando lwabo eNewcastle United KODWA ice hockey, ikhilikithi nethola.
U-Sean Longstaff nomntwana uMfoweth 'uMathewu
Uthi bewazi?… Uyise kaSean Longstaff uDavid wayengumdlali we-ice hockey wangaphambili waseGreat Britain owafaka izikhathi ezingaphezu kuka-100 ohlangothini lukazwelonke. Futhi, umama kaSean Longstaff wayengumdlali we-netballer owayesebenza kahle emdlalweni. Ukuqaphela umsebenzi womzali wakhe, uzobona ukuthi igazi lezemidlalo ligijima ngempela emithanjeni kaSean Longstaff.
Ngenxa yokuzibophezela kukababa wakhe kumsebenzi wezwe kanye neqembu, ukuhlala komndeni kaSean Longstaff eNgilandi kwaphela isikhathi esifushane. Ngesinye isikhathi esemncane, iSweden yaba izwe lakhe lesibili. Uyise kaSean uDavid wadlala ngenye yezinhlangothi eziphezulu e-Stockholm, eSweden.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - I-Education ne-Career Buildup
U-Sean Longstaff wakhetha indlela yokwenza imfundo emidlalweni eyinhloko ekuqaleni kwengane. Lokhu wathatha kuze kube namuhla. Ukuzikhandla kwamhlanje kunxushunxushelwe ekuhlangenwe nakho kwakhe ebuntwaneni lapho achitha khona isikhathi esiningi edlala iHockey kwi-ice rink yaseSweden.
U-Little Sean Longstaff ufunda ukuhweba koyihlo.
Kuleli phuzu (okufanekiselwe ngenhla) esemncane, kwakungaboni uSean Longstaff efuna ukuba ngumdlali webhola lezinyawo. Konke ayekufunayo kwakuwukulandela izinyathelo zikababa wakhe ekubeni yinkanyezi eqondile ye-ice hockey.
Naphezu kweHockey ne-Netball bekungukuhweba okukhulu, wonke amalungu omndeni waseLenstaff abambelele uthando lwabo ngoNewcastle United, owodwa obunzima ukuyeka. Eqinisweni, bobabili umama wakhe, ubaba, umfowabo, udadewabo, umalume nomalume babengubo bonke abalandeli beMagpies abaphila njalo futhi abafa. Ngesinye isikhathi, uyise kaSean Longstaff wabuyela ekhaya eNgilandi.
Lapho ebuyela eNgilandi ngokugcwele eSweden, uSean Longstaff waqala ukuthola imfundo yekhilikithi evela eTynemouth Cricket Club. Ekuqaleni, wabasiza abadlali beqembu lakhe ngokuwina umdlalo wakhe wokuqala.
Iminyaka Yokuqala YaseSean Longstaff neCricket. Isikweletu ku-Chronicle LIVE
Ngesikhathi edlala ikhilikithi, uSean Longstaff naye waya esikoleni samabanga aphezulu uJohn Spence. Esikoleni, wathandana nebhola futhi wazibona eshiya ikhilikithi. Ngaleso sikhathi, othisha bakhe eSikoleni esiphakeme babesazi ukuthi uSean Longstaff uzimisele ukwenza izinto ezinhle njengoba bebukele amakhono akhe emasimini abo. Ngakho lapho u-Longstaff egibela isimemo sokuya ekulingweni esikoleni sikaNewcastle United, ukuziqhenya kwabo kwakungekho mingcele.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
U-Sean Longstaff othobekile futhi othembekile kakhulu eneminyaka engu-9 wazibonela emigwaqweni futhi ebhalisa eNewcastle esikoleni lapho enikezwa khona esiteji ukukhombisa ithalenta lakhe. Ekuqaleni neqembu, u-Sean cishe wayenesimo esifanayo nesimo esifanayo nanjengoba wonke umuntu osezingeni elingaphansi kwe-9.
Sean Longstaff Umsebenzi Wokuqala Ekuqaleni
Kodwa-ke, akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba aqale ukwakha uhlamvu lwakhe, aphenduke inqubo enhle. Ngalesi sikhathi, uSean Longstaff waba izitaladi ngaphambi kwalabo abashade naye ngokwemikhuba nokuqina, kanye nekhono lobuchwepheshe. Lo mdlalo wambona enza intuthuko ehlelekile phakathi kwamaqembu ahlukene ehlukene futhi ezinikela emdlalweni webhola eliphakeme.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - Umgwaqo oDumela Igama
Ngemuva kokuphela komsebenzi wakhe osemusha noNewcastle, uSean Longstaff wazizwa ukuthi sekuyisikhathi sokuba enze isinqumo esinesibindi. Wakhetha ukuphuma eNgilandi ngenkokhelo eya eKilmarnock Football Club, eyaziwa ngokuthi iKillie. Leli qembu lebhola laseScotland elisesidolobheni laseKilmarnock, eMpumalanga Ayrshire.
Kuleli qembu, uSean Longstaff wasebenzisa isikhathi esiningi esebenzisa ukuzivikela kwakhe kanye nezinqubo ezidlulayo okwathi kamuva waba amandla akhe amakhulu.
Umgwaqo we-Sean Longstaff kuDumela lomlando
Ukuba ngumfundi onzima kakhulu futhi umfundi ocingayo okhokhelwa njengoSean Longstaff wabizelwa enye i-spell loan nge Blackpool. Ngesikhathi edlala iqembu lezinyoni zasolwandle, u-Longstaff waqala ukukhombisa ukuthi unamandla kangakanani ekuthuthukiseni phambili. Ngezansi ingqikithi yobufakazi bevidiyo.
Ukubona lezi zithuthukiso kwaqala ukuzama iNewcastle ngokucabanga ngokubuya okungenzeka kwendodana yabo siqu ekupheni kwakhe.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - Ukuphakama Kumlando Wendaba
Ngemuva kokuzwa izindaba ezinhle ezithinta abadlali babo e-Blackpool, iNewcastle United inqume ukukhumbula iSean yabo siqu. Lokhu kwenzeka ngesikhathi URafa Benitez kwaba nenhlekelele emaphakathi-ukulimala kuya Jonjo Shelvey futhi Mo Diame,
USean Longstaff wanikezwa ithuba futhi waphuthuma ngokushesha. Lokhu kuphakama kwezemvelo kwamanje kwambona waba yithenda elithakazelisayo kakhulu ekuphumeni esikoleni sika-club eminyakeni yamuva ngemuva kukaMichael Carrick.
I-Sean Longstaff Road eya eNkambweni Yegama- Izinsuku Zokudumisa e-Blackpool
Ukukwazi kukaSean Longstaff ukwenza imidlalo ibonakale kulula kwaziwa ngabalandeli. Wakha isitayela sokudlala esihlanganisa ubuhle bukaRolls Royce ngenjini ye-Mustang, okwenza abalandeli bakaNewcastle bahlabelele indumiso ngaye.
Ukuguqulwa okukhulu kweSean Longstaff impumelelo kufika esikhathini se-2018 / 2019 seza lapho ewuthola inhlawulo eyanikezela i-Newcastle ukuphumelela kwe-2-1 ngoManchester 2019. Kusukela ngalolo suku, igama lakhe liye lakwa-radar yokudluliselwa kwamaqembu aphezulu, okuphakathi kwawo uManchester United. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - Ukuphila Ubudlelwano
Ukuphila kothando kwabadlali bebhola laseNgilandi kukhona okubonakala kubangele abalandeli abaningi. Ngokungangabazeki, ukuphakama kukaSean Longstaff kuye kwashiya abalandeli bebuza ukuthi impumelelo yebhola lihambisana nentombi yakhe noma umfazi (okungukuthi uma unayo, njengesikhathi sokubhala).
Ubuhlobo Sean Longstaff Life- Credit to KillieFC.com
Awu yebo! angeke abe mnandi njengaye David Beckham, kodwa ngokumomotheka okunjalo emasontweni akhe, akukho ukuphika iqiniso lokuthi uSean Longstaff ngeke abe ngumvini othandekayo kubesifazane.
Njengasesikhathini sokubhala, kukhona imibono efihlakeleyo kuye kanye nentombazane yakhe noma umfazi wakhe okufanele abe. Yilowo ophunyuka ukuhlolisiswa kweso lomphakathi ngenxa nje yokuthi impilo yakhe yothando iyimfihlo futhi mhlawumbe idrama-mahhala.
Njengesikhathi sokubhala, uSean Longstaff uye wakhetha ukugxila emsebenzini wakhe futhi uye wazama ukugwema noma yikuphi ukukhanya empilweni yakhe yangasese. Leli qiniso lenza kube nzima ngathi ukuba sibe namaqiniso mayelana nokuphila kwakhe ngothando nomlando wokuphola.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - Ukuphila Personal
Ukukwazi ukuphila komuntu siqu kaSean Longstaff kude nomdlalo wokudlala kungakusiza uthole isithombe esiphelele kuye.
Sean Longstaff Personal Life Facts. Isikweletu kuManchesterEveningNews
Ukuqala, ungumuntu othulile, onamahloni futhi ojabule. Eqinisweni, uSean Longstaff ungumuntu okwazi ukumelana nobunzima bezinhlobo zonke ngaphandle kokuzizwa kwemizwa. Angaphendulela isandla sakhe kunoma yikuphi okushiya kuye, kungakhathaliseki ukuthi ikhilikithi, i-badminton, i-table tennis noma ibhola. Konke lokhu kuhlanganiswe nendlela yakhe enhle yokuphila, izimpande zakhe zofuzo nezimpande zomndeni.
USean Longstaff ngumuntu othakazeliswa yi-balance balance, symmetry futhi ungumlaleli omuhle ojwayelekile.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - LifeStyle
USean Longstaff uthola imali enempilo kusukela emsebenzini wakhe wezemidlalo njengomdlali webhola lezinyawo. Lokhu, noma kunjalo, AKUKHULUMI ngendlela yokuphila evusa amadlingozi isibonelo esibonakala ngezansi.
Sean Longstaff Lifestyle Facts. Isikweletu ku Mirror kanye ne-MSN
Njengesikhathi sokubhala, u-Sean Longstaff akavunyelwe ukuba aphile ngendlela enhle kakhulu isib. Ukuchitha njengokwesiphukuphuku, ukubonisa imoto yezimoto ezingavamile, amantombazane kanye ne-buzz. Akenenkinga enkulu yokuphatha izimali zakhe zebhola nokulondoloza ezinye izinsuku zemvula.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - Ukuphila Komndeni
Ukuphumelela kukaSean kuphelela ekukhuliseni kwakhe kokubili ekhaya lakhe kanye nemfundo yakhe eJohn Spence Community High School eNyakatho Shields. Manje ake sikunike ulwazi olumayelana nomndeni wakhe.
Mayelana noBaba kaSean Longstaff: UDavid Longstaff wazalwa ngo-26th ka-Agasti 1974. Ebhekene nosuku lwakhe lokuzalwa, uDavid wayesebenza noSean lapho ehamba ne-23.
UDavid Longstaff phakathi nezinsuku zomsebenzi wakhe njengenkanyezi yeHockey.
UDavid Longstaff uqala umsebenzi wakhe neqembu lakhe lakuleli dolobha, iWopley Bay Warriors ngaphambi kokuthuthela eSheffield Steelers e-1995, iqembu elinezinqola eziningana nokuphumelela emidlalweni eminingi yezemidlalo neyokudlala.
Uthi bewazi?… UDavid Longstaff ngesikhatsi sakhe esiyinhloko esinikezwe i-Young Player yonyaka noMdlali we-Superleague wezinkokhelo zonyaka. Ngezansi isithombe sakhe ngenkathi ebusa umhlaba njengenkanyezi yeHockey.
UDavid Longstaff- phakathi nezinsuku zakhe ezinkulu. Isikweletu ku-HeShootSheScores.
Njengesikhathi sokubhala, uDavid Longstaff usasebenza njengomqeqeshi womdlali weWhiteley Warriors.
Mayelana nomama kaSean Longstaff: Ngokungafani nomyeni wakhe uDavid, uncane kakhulu owaziwayo ngoMama Sean Longstaff ohamba ngegama elithi Michelle Longstaff. Njengomyeni wakhe, ungumdlali wezemidlalo owagxila futhi wenza kahle eNetball.
Mayelana noMfoweth 'kaSean Longstaff: Njengesikhathi sokubhala, umfowabo omncane kaSean Longstaff uyingxenye yeqembu elingaphansi kwe-23s eNewcastle. Ukuthi laba bobabili abafana baphumelele kuleli qembu kusho ngokucacile ukuthi bobabili banamakhono, ngenxa yamagugu abekwe kuwo kusukela esemncane.
Mayelana nezihlobo zikaSean Longstaff: Ubaba kaSean uDavid Longstaff ungumzala wase-England owayengumhlaba wonke u-Alan Thompson obizwa ngeSean uncle.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - Amaqiniso angaziwa
Ukuqhathaniswa noDurlan Rice:
Ukuqhathanisa noSean Longstaff kuya Declan Rice. Isikweletu ku I-Sky Sports
Uthi bewazi?... Njengesikhathi sokubhala, abanye abalandeli bacabanga ukuthi ukuqhathanisa noSean Longstaff Declan Rice kufana nokuqhathanisa izibalo ze UFrank Lampard kuya UPaul Scholes.
Emuva ngaleso sikhathi, ngenkathi UPaul Scholes wabamba okuhlangenwe nakho okuningi kodwa Lampard babe nezibalo. Kulokhu, naphezu kokuba uneminyaka encane, iRissi iyisidlali esinesipiliyoni kodwa u-Longstaff uqobo lwakhe uma kuziwa ezimatheni zebhola.
Njengesikhathi sokubhala, bobabili i-Longstaff neRis njengamanje bafaka isimangalo sabo sokuba bafakwe eqenjini likazwelonke lesiNgisi. Kodwa lo mshini ngesikhathi sokubhala awukhulumi okuningi mayelana nalabo abancane abaphakathi.
Sean Longstaff Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts - Isifinyezo sevidiyo
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Sean Longstaff Childhood kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
UScott McTominay Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Untold Biography Facts